Tsikafonkafombazaha - Wikipedia
Tsikafonkafombazaha maniry ao Imerinafovoany, Madagasikara
Ny tsikafonkafombazaha dia karazana zavamaniry maniry an-drenirano sy amin' ny lakandrano ary anaty farihy, amin' ireo faritra manana toetanin-jana-pehin-tany, ao amin' ny fianakavian' ny Pontederiaceae. Any any Amerika Atsimo no fiaviany, ao amin' ny deboka amazôniana sy ao amin' ireo farihy lehibe sy honahona ao amin' ny faritry ny Pantanal any amin' ny tapany andrefana amin' i Brezila. Eichhornia crassipes no anarany ara-tsiansa.
Anisan' ireo zavamaniry ratsy maniry sy miparitaka haingana ny tsikafonkafombazaha. Ny tahony dia mitambatambatra metevina sady mitsinkafona ambony rano. Izy no haingam-paniry indrindra amin' ny zavamaniry rehetra: mahatratra 2 hatramin' ny 5 m isan' andro ny karazany sasany maniry any Azia Atsimo-Atsinanana.
Tsikafonkafombazaha ao amin' ny Kruger National Park atsy Afrika Atsimo
Ny Eorôpeana no nampiditra ny tsikafonkafombazaha teto Madagasikara tamin' ny taona 1925; taty aoriana dia nanelingelina ny fikorianan' ny rano amin' ny lakandrano io zavamaniry io sady nameno ny farihy sy ny dobo. Atao sakafon' ny omby be ronono anefa izy sady azo atao zezika amin' ny tanimbary.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsikafonkafombazaha&oldid=1041308"
Voaova farany tamin'ny 9 Desambra 2021 amin'ny 10:13 ity pejy ity.